Ukubuyekezwa kweKaramba Casino I-100% R3000 +20 Ibhonasi lama Spins wmahhala
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-karamba casino ku inthanethi ne selula
Isibuyekezo se-Karamba Casino ku inthanethi ne selula
Isofthiwe:Microgaming, NetEnt, Yggdrasil, Aristocrat, Cryptologic
Usizo: 24/7 customer support through email, 24/7 Live Chat
Ibhonasi Lokukwamukela:100% Webhonasi Yomdlalo Ize Ifike R3,000
100 Ama-Free Spins
I-Karamba ifisa ukuba yipulatifomu ehamba phambili eku-inthanethi yemidlalo yasekhasino nokubheja kwezemidlalo. Futhi impela isendleleni efanele, enikeza ukuxubana kwamabhonasi amangalisayo, imidlalo ephezulu, kanye nensizakalo enhle yamakhasimende.
Amalayisense abaluleke kakhulu emidlalweni yekhasino eku-inthanethi – amakhasino amahle kakhulu aku-inthanethi anikezwe ilayisense yiziphathimandla ze-EU nezase-UK. Futhi uKaramba uhola indlela lapha, ngemvume yeKhomishini Yezokugembula yase-UK, iMalta Gaming Authority, kanye nezimvume zaseSweden nase-Ireland.
Ngobufakazi obuhle kangaka, kanye nerekhodi elingenachashaza eliku-inthanethi elaqala ngonyaka ka-2005, iKaramba iyi-casino ephephile nethembekile eku-inthanethi yabadlali abavela emhlabeni wonke. Futhi lokho kufaka nabantu baseNingizimu Afrika, abamukelekile ngokugcwele ukudlala lapha.
Lokhu kubuyekezwa kuzobheka iKaramba Casino ngombono waseNingizimu Afrika – ingabe ikhasino liletha izici ezanele zabadlali abavela kuRainbow Nation? Ake sithole.
2021 Amakhodi Ebhonasi Yokwamukela e-Karamba Casino
Ibhonasi Yosuku 1 Thola ibhonasi yedipozithi yomdlalo engu-100% kuze kufike ku-R3000 + nama-20 spins wamahhala kwidiphozi yakho yokuqala
Ibhonasi Yosuku 2 Thola ibhonasi yamahhala yama-spins wamahhala angu-40 ngosuku lwakho lwesibili eKaramba Casino
Ibhonasi Yosuku 3 Thola amanye ama-spins wamahhala angu-40 ngosuku lwesithathu, kanye nokumangala kwebhonasi
I-Karamba Casino ayisebenzisi noma yimaphi amakhodi ebhonasi ephakeji lawo lokwamukela – yonke into izenzekelayo. Odinga ukukwenza nje ukubhalisa i-akhawunti entsha umdlali futhi wenze idiphozi yakho yokuqala. Ukufuna ama-spins amahhala ngena ngemvume ngosuku 2 no-3 eKaramba Casino.
Amakhodi Ebhonasi Yediphozithi Engekho e-karamba Casino
I-Karamba Casino ayizange inikeze noma yimaphi amakhodi wediphozi ngesikhathi sokubuyekezwa.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yiKaramba Casino
Umdwebo Womklomelo Weviki WeKaramba Beka ukubheja emidlalweni ekhethiwe bese uthola ithuba lokuwina u-R30,000 masonto onke!
Ikhalenda le-Advent Qedela izinselelo ezijabulisayo zansuku zonke zokuwina imiklomelo ejabulisayo nsuku zonke ekhasino.
I-Karamba yansuku zonke Funa izinzuzo ezijabulisayo kufaka phakathi ama-bonus spins, ukubuyisa imali, ukunikezwa kwediphozithi, nokuningi nsuku zonke.
Ungangena kanjani futhi ubhalise ku-inthanethi e-Karamba Casino
Iwebhusayithi inezinkinobho ezimbili ekhoneni eliphezulu kwesokudla – kunzima ukugeja. Sebenzisa inkinobho enombala oteal “LOGIN” uma usunayo i-akhawunti ebhalisiwe e-Karamba Casino. Faka igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi ukungena ngemvume bese uqala ukuwina.
Uma umusha ekhasino, chofoza kunkinobho ephinki ethi “JOYINA” esikhundleni salokho. Ukwakha i-akhawunti entsha kulula – yonke inqubo ihleleke kahle, ungayiqeda ngemizuzu embalwa nje. Vele ufake imininingwane efana negama lakho, ikheli le-imeyili, kanye neminye imininingwane yokuxhumana ukuze uqalise.
Inqubo yokungena / yokubhalisa eKaramba Casino ayidingi i-PC. Ungakwenza kunoma iyiphi idivayisi yeselula noma ithebhulethi futhi!
Imidlalo Yekhasino eku-inthanethi Ongayidlala eKaramba Casino
IKaramba Casino inezindawo ezintathu eziyinhloko zokubheja – “iCasino” kulapho uzothola khona zonke izikhala, imidlalo yetafula, nezinye izihloko zokugembula ku inthanethi. Kunokuningi ongakhetha kukho lapha ngeziqu ezingajwayelekile ezingaba ku-800.
Ikhasino inezikhala ezivela kwabanye abathengisi abahle kakhulu – iNetent, Microgaming, Quickspin, Red Tiger, Nextgen – kunabahlinzeki besoftware abangaphezu kwama-20 eKaramba. Futhi zifaka nemikhiqizo yamageyimu ejwayelekile engatholakali kumakhasino amaningi. I-Bally iyisibonelo.
Enye indawo yokudlala ephawuleka eKaramba yingxenye ye- “Live Casino”. Lokhu kuhlaba umxhwele ngempela, kunamakamelo wemidlalo ehlukene ayi-120, anikwe amandla yizinkampani ezinkulu ezinjengeNetent. Ake sibheke kabanzi ngezigaba ezahlukahlukene.
Ukuhluka Okukhulu Kwe-Slots
I-Karamba Casino inokukhethwa okumangazayo kwezindawo ezingaphezu kwezingu-750, kufaka phakathi ama-video slots, ama-3D slots, nezindawo ezinhle ezingama-reel ezi-3 ezindala. Ngeziqu ezingaphezu kuka-100, uNetent uyinkanyezi yombukiso lapha. Ezinye ze-stellar Netent slots ongazidlala lapha zifaka okwakudala okufana ne-Starburst ne-Gonzo’s Quest, kanye nezihloko ezintsha ezifana ne-Drive, Hotline 2, Vikings, Narcos, ne-Conan. Izikhala ezintsha sha ezivela kwabanye abathengisi zifaka phakathi iRiches of Midgard, Madame Ink, Aloha Christmas, ne-Eastern Emeralds.
Amageyimu Wakho Wethebula Wakudala
Uma uthanda ukujabula kwe-Blackjack noma i-Roulette, i-Karamba inokukhetha okuhle kakhulu kwemidlalo yasekhasino eyi-33 yakudala. Abalandeli beBlackjack bangalindela imidlalo efana ne-Multi-Hand Blackjack, i-Atlantic City Blackjack, i-European Blackjack, ne-Blackjack Royal Pairs. Ngomdlalo omnandi we-roulette, khetha ezihlokweni ezinjengeRoulette Royal, i-European Roulette, ne-Lounge Roulette. Eminye imidlalo ephawulekayo ihlanganisa iJoker Poker, iDeuces Wild neCasino Patience.
Ama Jackpots Amakhulu Aqhubekayo
Lesi yisigaba esincane sesithathu nesokugcina ongasithola esigabeni se-Casino. Banemidlalo engu-17 ye-jackpot lapha, evela kubathengisi abanjengo Netent no-Quickspin. Uma ufuna ukuwina izigidi zamarandi, bheka imidlalo efana ne-Divine Fortune, Mercy of the Gods, Temple of Wealth, neVegas Night Life.
I-Karamba ikunikeza iqoqo elikhulu lamagumbi wegeyimu wekhasino abukhoma ayi-120. Kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje bokusakaza ividiyo, lesi sigaba siletha isipiliyoni sekhasino sangempela – umdlalo ngamunye usingathwa ngumthengisi wabantu wangempela, kusetshenziswa amakhadi / roulette / idayisi langempela, estudiyo. Ungabeka ukubheja bukhoma emidlalweni futhi uxoxe nomphathi phakathi kwamarounds. IBlackjack, i-roulette, i-baccarat, i-Caribbean stud poker, ne-catcher catcher iphakathi kwemidlalo edlalwe lapha.
I-Karamba Mobile Casino: Iqhathaniswa Kanjani i-Karamba Casino KumaSelula?
I-Karamba Casino isebenzisa ubuchwepheshe besimanje obusheshayo bewebhusayithi eku inthanethi. Inikwe amandla yi-Aspire Gaming, ipulatifomu yesoftware isebenza kuwo wonke amakhompyutha wanamuhla namadivayisi eselula. Okuhle lapha ukuthi awudingi ukulanda izinhlelo ezihlukile kuma-iPhones noma kumadivayisi we-Android.
Sebenzisa isiphequluli sakho sewebhu osithandayo ukungena ekhasino bese udlala imidlalo. Izikhala, imidlalo yetafula, nemidlalo ebukhoma konke kulayishwa ngqo kusikrini sakho sesiphequluli kungakapheli imizuzwana. Uhlobo lweselula lweKaramba lufana nenguqulo ye-PC ngokuya ngezici, imidlalo nokusekelwa.
Umehluko kuphela ukuthi ubukeka uhluke kakhulu njengoba ukwakheka kanye nesikhombimsebenzisi kufanele senziwe ukuze kutholakale ulwazi olungcono kuzikrini zeselula. Inqobo nje uma uxhumano lwe-inthanethi luzinzile (kunconywe i-4G noma i-WiFi), isipiliyoni sakho semidlalo yeselula ngeke sibe nasici eKaramba Casino.
Ngingalanda i-Karamba Casino kufoni yami?
Cha, njengoba kushiwo ngenhla, iKaramba Casino ayinazo izinhlelo zokusebenza ezingalandwa – sebenzisa isiphequluli se-Chrome noma se-Safari ukuze udlale kuselula yakho.
Izindlela Zokuhoxa Nediphozithi Ezamukelwa e-Karamba Casino
Visa/MasterCard Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Skrill Yebo 48-72 amahora Yebo
Neteller Yebo 48-72 hrs Yebo
EcoPayz Yebo 48-72 hrs Yebo
Entropay Yebo 48-72 hrs Yebo
Trustly Yebo 48-72 hrs Yebo
Bank Transfer Yebo Izinsuku 3-5 Yebo
Zimpler Cha N/A Yebo
EPS Cha N/A Yebo
Sofort Cha N/A Yebo
Euteller Cha N/A Yebo
Inhlangano ye-Karamba Casino kanye Nemininingwane Yokuxhumana
Imininingwane ejwayelekile ye-Karamba
Ukuxhaswa Kwamakhasimende we-Karamba
Kusungulwe: 2015 Inombolo yamahhala ye-SA: NA
Opherethwa ngu: Aspire Global Kusetshenziswa ngu: Aspire Global
Ilayisensi: UK GC, MGA, Ireland, Sweden Ingxoxo Esheshayo: Yebo
Iselula: Yebo Ukusekelwa kwe-24/7/365: Cha (08:00 - 00:00 CET)
Izinzuzo nezingozi ze-Karamba Casino
Manje njengoba usunalo lonke lolu lwazi, sizokukhombisa ukuqhathanisa okulula kakhulu kobuhle nobubi bawo.
Angaphezulu kuka-750 Slots Akuwona ama-jackpots amaningi aqhubekayo
Amakamelo womdlalo we-Live Casino ayi-120 Imbalwa imidlalo ye-poker yevidiyo
Izikhala ezivela kuNetent nabanye abathengisi abaphezulu Akukho ukuxhaswa okungu-24x7
Ilayisensiwe yi-UK, Malta, neSweden
Amakhasino athembekile ayasebenza kusukela ngo-2005
Yini Eyenza I-Karamba Casino Ukhethe Oludumile Kubadlali BaseNingizimu Afrika?
Ikhasino yemukela izinkokhelo ngeRandi
Amakhasino athembeke kakhulu anikezwe ilayisense e-UK naseMalta
Izikhala ezingaphezu kuka-700 ezivela kubathengisi abaphezulu abanjengoNetent
Ukukhetha okukhulu kwemidlalo yasekhasino ebukhoma
Izikhalazo ze-Karamba Casino yase-Ningizimu Afrika
Zintathu kuphela izigaba zemidlalo – akukho poker yevidiyo, imidlalo yebhingo / lotto / arcade
Ikhasino idinga ukwengeza ama-jackpots aqhubekayo
Ukusekela akutholakali 24×7
Imibuzo Ebuzwa Njalo (i-FAQ)
Ngabe iKaramba Casino isemthethweni e-Ningizimu Afrika?
Awekho amakhasino aku-inthanethi asemthethweni eNingizimu Afrika. Imithetho kazwelonke yokugembula ayivumeli izinkampani ukuthi zinikeze ngezinsizakalo ze-casino eziku-inthanethi kubahlali baseNingizimu Afrika. Kepha njengoba iKaramba Casino iyikhasino elayisensi eliku-inthanethi elizinze ngaphandle kwezwe, iziphathimandla zaseNingizimu Afrika azikwazi ukuyithathela izinyathelo. Futhi, umthetho awubajezisi abadlali ngokufinyelela kumakhasino aku-inthanethi – kuphephile nge-100% ukudlala eKaramba Casino uma uhlala eNingizimu Afrika.
Ngiyikhipha kanjani imali KARAMBA CASINO?
Ukukhipha imali kwi-akhawunti yekhasino, kufanele ufake isicelo sokuhoxa. Okokuqala, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho yekhasino bese uhlola ibhalansi ukuze ubone ukuthi unakho yini okwanele ukwenza ukuhoxiswa okuncane. Futhi, hlola ukuthi unazo yini izidingo zokubheja zebhonasi ezisebenzayo. Uma kunjalo, gcwalisa ukubheja ngaphambi kokuzama ukuhoxa ukuze ugweme ukuvala ama-winnings akho!
Uma usenelisekile ngamasheke, iya esigabeni sokufakwa kwemali sekhasino nokukhishwa kwemali. Khetha ukukhipha imali bese ufaka inani ofisa ukulidlulisela ku-akhawunti yakho yasebhange. Khetha indlela yakho yokukhokha – ngokuvamile, ikhasino lizozama ukuthumela imali ngenkonzo efanayo yokukhokha esetshenziselwe amadiphozi. Ngemuva kokuhambisa isicelo, iqembu lekhasino lizosicubungula kungakapheli amahora angama-48.
Iyini iKaramba Casino?
I-Karamba Casino iyikhasino elayisensi eliku-inthanethi elisebenza kusukela ngo-2005. Isekwe eMalta kepha yamukela abadlali abavela emazweni omhlaba wonke, kufaka phakathi iNingizimu Afrika. Ikhasino ikuvumela ukuthi udlale imidlalo yangempela yokugembula efana nezikhala, imidlalo yetafula, kanye namajackpots. IKaramba Casino ithenjwa yizigidi njengoba ithwala amalayisense adumile avela kuKhomishini Yezokugembula yase-UK naseMalta Gaming Authority (okuyizindikimba ezimbili ezihamba phambili zokuthola amalayisensi ekhasino emhlabeni)
Ubani Ophethe iKaramba Casino?
I-Karamba Casino iphethwe yinkampani ebizwa nge-Aspire Global – izinze eMalta naseBritish Virgin Islands. Le nkampani yaziwa kakhulu emibuthanweni yekhasino yaseYurophu futhi iba nesoftware nemidlalo. Kukhona amanye amakhasino aku-inthanethi aqhutshwa yileli gro
Ngabe iKaramba Casino Inezici Zokubheja Ezemidlalo?
Yebo, iKaramba Casino inesigaba sokubheja kwezemidlalo ngempela. Kepha izici ze-sportsbook azitholakali eNingizimu Afrika – kufanele ube yisakhamuzi sase-UK ukujabulela leso sigaba. Esikhundleni salokho, ikhasino inikeza ukubheja kwe-Virtual Sports kubadlali okungebona abase-UK.
Ngabe i-Karamba Casino inikeza uhlelo lweVip?
Cha, i-Karamba Casino ayikhangisi nganoma iyiphi iklabhu noma uhlelo oluthile lwe-VIP. Kepha ikhasino inohlelo lwebhonasi yokwethembeka. Iyasebenza ngokushesha nje lapho ujoyina ikhasino. Uthola amaphuzu ngokubheja ngakunye okubeka ezindaweni zokugembula nemidlalo eKaramba – uma sekuqoqiwe, kusebenze ku-Isitolo Sezipho ukuze ufune ama-spins wamahhala, ukubuyisa imali, nezinye izinselelo.
Yiziphi Izidingo Zokubheja eKaramba Casino?
Ibhonasi yokwamukela eKaramba iphethe isidingo sokubheja esingu-35x kubhonasi + idiphozi. Ngezinkokhelo zamahhala, inani lokubheja lisuselwa kokuzuziwe. Amabhonasi abadlali ajwayelekile, ukukhushulwa nsuku zonke, nokunye ukunikezwa okuvela ekhasino nakho kuphatha imfuneko efanayo yokubheja engu-35x, ngaphandle kwalapho kukhonjisiwe ngenye indlela.